Ukuqhathanisa phakathi kwezinguquko ze-PMP V / s PRINCE2
28 -nov 2016
I-PMP V / s PRINCE2:Ukuhamba kokuqala ekufinyeleleni kungase kube ukukhetha lokho okushiwo yize kunjalo umkhondo olandelayo ngokuqinisekile ukhethe phakathi kwezinsimbi ezahlukene zokufunda kanye neziqinisekiso ezithuthukisa izici ezidingekayo ukuze zikwazi ukuhlonywa kahle ngokufanelekile emsebenzini.
Kwi-Venture Administration, ukuqinisekiswa okubili okubambisana kakhulu nokwesekwa okukhulu ngabachwepheshe bokubhalisa kuyi-PRINCE2 - isichazamazwi seMisebenzi EZIMINYELWENI EZIKHETHELEKILE kanye ne-PMP-njalo iselele ukuphathwa kwe-Venture Administration. Njengengcweti entsha ekhulayo, ubani ozokhetha ukuthi yikuphi ukugunyazwa okuyokwenza ithonya elidingekile ngempela eliphikisana nabaphikisi futhi lizokwenza amandla okushayela emkhakheni wezokuPhatha kwezokuVikela?
I-PMP V / s PRINCE2: Kuyini ukuphikisana kwamazwi?
PMP yisiqinisekiso. (I-PMP igxila kuKanjani).
Noma kunjalo, PMP akuyona nje inkambo yesiko ongayithola. Kuyinto yokugunyazwa, noma ngaphezulu kunalokho uhlelo lokukwazi, oluqale ekuqaleni eU.SA. Kuyinto evamile ukuthi izinhlangano eziningi ezikhohlisayo zithatha isamba sokulinganisa ukulinganisa ikhono lokukhetha emkhakheni wokuphathwa kwezebhizinisi, futhi kufaka hlangana ifilosofi efakwe ngaphesheya kwamabhizinisi ahlukahlukene, izinqubo zokufunda nokukhipha amandla nokucabanga okucabangelayo okudingekayo ukuqeda i-Venture Chief ezayo.
Abantu abathile abangena ebhizinisini bazothola ukuthi kuhlanganiswa futhi kubhekiswe yonke imininingwane yezimiso ezizobasiza ukuba baqonde izinqubo zokuphatha ezentuthuko kangcono. Ngokungangabazeki kuqinisekisa isamba esikhokhelwayo esiphezulu futhi labo abalindele ukwenza umsebenzi eNyakatho Melika njengomqondisi wezokuthuthukiswa kweBhizinisi ngokuqinisekile bayofaka izihlalo eziphambili kwikholomu yangaphambili. Ihlinzeka ngokuvula ama-openness management systems, ukusiza amakhasimende ukuba afinyelele nge-intanethi yokuqala eyakhayo eyenza i-CV ibe mkhulu ngempela phezu kokudonsa isikhathi eside.
Khona-ke, PRINCE2 - ucatshangelwe ku-UK (Ukugxila ku-Kungani) - uhlelo lwe-Venture Administration ngokwalo, olunemithetho ethile mayelana nendlela yokuhlela nokwenza umsebenzi, ukuqedela ngezigaba ezingenakwenzeka zokuhlela, amafomethi kanye nemicabango engasetshenziswa phakathi nenqubo . Kanti futhi ingxenye kanye nezibopho wonke osebenza nabo ukuzama. Izakhi zalo zibandakanya ukuhlelwa kokuhlelwa kwemisebenzi ngokulandela amalungiselelo okuhlela, ukuhlela izinhlelo kanye nokuhlela iqembu.
Abantu abaye bahlangabezana nalezi filosofi manje banomuzwa wokuthi konke kokubili kuqhutshwa futhi kusetshenziswe inqubo, kugcwalisa njalo amandla amabili. Njengoba kuyisimo esiqinisekisiwe ngokucophelela, sisuke sikulungiselela umfundi kuze kube phakade, sibonisa ukuthi kufanele yini ukuhlela ukuqhubekela phambili ekuthuthukisweni komunye nomunye, futhi kumsize ukuba athuthukise njengenhlawulo kanye nokukhokha okubanzi lapho azothola khona lapho ehola ukuphatha kahle isikhundla. Ngendlela yayo yokusebenza, amaklayenti avela kunoma yiliphi isizwe angaqonda futhi asebenzise amalungiselelo emisebenzini ethile, okwenza le nqubo ibe yizinga elikhulu ebangeni ngalinye.
Ngokubheka ukuthi uchwepheshe udinga kanjani ukuqoqa ukuqonda, lapho kudingeka azibone khona futhi lapho imboni edingeka khona ukusebenza, futhi lapho ehlelwe khona ngokwengqondo angakwazi ukunquma phakathi kwalaba ababili.
Izifundo ze-3 zokuba umlutha we-Training Management Professional Training